Doon ay la socdeen Mas'uuliyiin oo ku degtay Wabiga Shabeelle ee Magaalada Beled Weyne.
Monday October 28, 2019 - 15:26:04 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in mas'uuliyiin katirsan maamulka isku magacaabay Hirshabeelle ay ku hafteen biyaha wabiga shabeelle kadib markii ay la qalibantay doon ay ku safrayeen.
Goob joogayaal ayaa sheegay in duqa magaalada Beled Weyne iyo Cabdi Fataax Xasan Faarax guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan ay kamid yihiin mas'uuliyiinta ku daatay biyaha wabiga markii ay doontu laqalibantay.
Doontan ay la socdeen mas'uuliyiinta ayaa dadka isaga kala gudbisa xaafadaha magaalada Beled Weyne kadib markii wabiga Shabelle uu ku fatahay gudaha magaalada iyo hareeraheeda.
Warar hordhac ah ayaa sheegaya in ugu yaraan 15 qof ay ku dhinteen shilka ka dhacay wabiga shabelle, dadka ku dhintay doonta qallibantay waxaa kamid ah saraakiil katirsanaa maamulka Hirshabeelle.
Xildhibaan Cabdi Risaaq oo kamid ah baarlamaanka dowladda Federaalka ayaa sheegay in sedax dumar ah oo xilal ka hayay maamulka Hirshabelle ay kamid yihiin dadka ku dhintay doonta qallibantay waxaana kamid ah lataliyihii dhanka Haweenka uqaabilsaneed madaxweynaha 'Hirshabelle.
Diyaarado Helicopterro ah oo Q.Midoobay leedahay ayaa lagu arkayaa iyagoo dul heehaabaya wabiga dushiisa waxayna dadaal ugu jiraan sidii ay usoo badbaadi lahaayeen mas'uuliyiin wali nolol iyo geeri lagu la'yahay wabiga.
Wabiga Shabeelle ayaa si aan horay loo arag ugu fatahay magaalada Beled Weyne, dad goob joogayaal ah waxay sheegeen in biyaha wabiga ay magaalada ka sare mareen, roobab mahiigaan ah oo xalay ka da'ay gobolka Hiiraan ayaa xaaladda sii cakiray.